Indlu yoQeqeshi- eneNdawo yaBucala kunye neLake - I-Airbnb
Indlu yoQeqeshi- eneNdawo yaBucala kunye neLake
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJosephine
Ibekwe kwindawo entle yasefama, kukho ukuhamba okwaneleyo kunye nokuhlola ekufuneka kwenziwe nje ukuba uphume emnyango. Nokuba ujonge iveki ezolileyo ye-R&R okanye iholide esebenzayo yokujonga amagugu eSussex, le yeyona ndlela yokubaleka.
Indlu yoQeqesho enomtsalane emi kwifama enkulu esebenzayo eSussex, imbali yayo isusela kwinkulungwane ye-16. Ihlaziywe ngokumnandi, inekhitshi yesicwangciso esivulekileyo, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, elinomnyango ophumela kwigadi yabucala ebiyelwe ngodonga. Kukho igumbi lokuhlambela losapho ezantsi elinebhafu, ishawa kunye ne-loo. Phezulu kukho igumbi elinamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela eline-en-suite kunye neshawari. I-semi-deched cottage izidla ngophawu oluvezwe ngemiqadi kunye neempawu ukusuka xa ipropathi yayisetyenziswa njengesakhiwo esisebenzayo efama.
Ndingabonelela ngesitulo esiphezulu, ibhedi yokuhamba (ibhedi ayibonelelwanga), unogada webhedi kunye nesango lezinyuko. Nceda undazise kwangaphambili ukuba ufuna nayiphi na kwezi zinto njengoko zingagcinwanga endlwini.
I-HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video, izitishi zeTV eziqhelekileyo
EASTBOURNE: 15 imizuzu yokuqhuba. I-Eastbourne yaziwa kakhulu njengonxweme lokukhanya kwelanga kwaye ineyona mozulu intle eNgilani. Indawo ekufuneke ibonwe kuyo ibandakanya iiDowns eziqengqelekayo ezithe chu kancinci ukusuka kwindawo yobuhle yelizwe iBeachy Head ukuya kumgama omalunga neemayile ezi-2 ubude bePromenade. I-Eastbourne isingathe i-AEGON International Tennis Championship, itumente etsala abadlali abaninzi behlabathi ababalaseleyo kwintenetya; I-Airbourne, umboniso womoya wasimahla wase-Eastbourne kunye nowona mboniso womoya mkhulu ophambi kolwandle emhlabeni kunye nemiboniso ye-West End kunye nee-ballet.
I-BRIGHTON: Imizuzu engama-30 ngololiwe osuka ePolegate okanye uhamba ngemizuzu engama-45. Ithathwa njengenye yezona zixeko zinabantu abaninzi eYurophu, iBrighton ibonelela ngento kuyo yonke indlela yobomi. Ndwendwela iRoyal Pavilion, iZiko loLwandle lweBrighton, ujonge ulonwabo lolwandle lweBrighton Pier, iWheel yeBrighton kunye nolwandle oludumileyo lwengqalutye.
I-LEWES: Imizuzu engama-30 yokuqhuba okanye imizuzu eli-15 ngololiwe ukusuka ePolegate. Bhrawuza iivenkile zakudala zaseCliffe, ndwendwela imarike yamaFama ngoMgqibelo wokuqala rhoqo ngenyanga uyokuthatha imali emnandi yasekhaya. Ngena kwiiBhili zokufumana ikomityi okanye ukuluma ukuze utye. Yiba nepinti yeHarveys, isiselo sasekhaya, kwaye uthathe umculo kwenye yee-pubs ezinobuhlobo kule ndawo.
GLYNDEBOURNE - imizuzu engama-25 ukuqhuba. Enye yezona zindlu zibalaseleyo kunye nezona zibhiyozelwayo zeopera kwihlabathi inikezela ngemiboniso kubantu abamalunga ne-150,000 kuMnyhadala wehlobo kunye noKhenketho lwasekwindla. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube namatikiti ke INdlu yoQeqesho ibonelela ngendawo efanelekileyo yokuhlala kulo msitho.
I-CHARLESTON TRUST: imizuzu engama-20 ukuqhuba. ICharleston yindlu yefama yaseSussex yenkulungwane yeshumi elinesixhenxe eyayiyindawo yokurhoxa yeqela laseBloomsbury. Ivula unyaka nonyaka phakathi kuka-Epreli noNovemba ukuya malunga neendwendwe ezingama-35,000 kwaye iqhuba inkqubo kawonke-wonke yeendibano zocweyo, iintetho, iindawo zokuhamba kunye neziganeko kunye neMinyhadala emibini yoncwadi, omnye ngoMeyi kunye nomnyhadala webali elifutshane ngoSeptemba.
I-PEVENSEY CASTLE: Imizuzu eyi-10 yokuqhuba. Ngembali esusela emva kwiinkulungwane ezili-16, yayiyindawo yokumisa yomkhosi kaWilliam uMnqobi ngo-1066. Phonononga imigodi emnyama kwaye ujonge isiporho se “Pale Lady of Pevensey”.
I-HERSTMONCEUX CASTLE GARDENS KUNYE NEZIGABA: Imizuzu engama-20 yokuqhuba. I-Herstmonceux idume ngenqaba yayo entle ehonjisiweyo, ebekwe phakathi kwepaki entle kunye neegadi zaseElizabethan ezintle. Yakhelwe okokuqala njengekhaya lelizwe phakathi kwenkulungwane ye-15, iHerstmonceux Castle iquka imbali yeMedieval England kunye nokuthandana kweRenaissance Europe.
UKUHAMBA: Kukho iirambles zothando, uhambo olusecaleni lolwandle kunye neendlela zokupapasha ukuze ukonwabele eSussex. Hamba amawa eBirling Gap kwaye wonwabele iimbono ngapha kweSouth Downs kwaye uphume uye elwandle, kwaye ubone oodade abasixhenxe abamangalisayo kunye nendlu yesibane. Kubahambi abanzulu ngakumbi kukho i-1066 Country Walk. Le khilomitha ye-50 (iikhilomitha ezingama-31) ihamba ukusuka e-Rye ukuya e-Pevensey, ihlola iindawo ezidityaniswe ne-Battle of Hastings. Idlula emaphandleni ecaleni kwezindlu zase-oast, ii-windmills kunye neenxalenye ze-South Downs. Intabalala yohambo olwahlukeneyo kunye olunomtsalane lunokufumaneka kwi-intanethi ngokukhangela 'Iihambo ezizikhokelayo zase-East Sussex'
I-ROYAL EASTBOURNE GOLF CLUB - imizuzu engama-20 ukuqhuba. Ukulala phantsi kweSouth Downs, iRoyal Eastbourne Golf Club ibonelela ngabo bonke abadlali begalufa ukusuka kwabaqalayo ukuya kwi-low handicapper, amava amnandi ngokwenene egalufa. Setwa ngaphakathi kweehektare ezili-130 zetshokhwe ezantsi kumhlaba kunye nemibono yepanoramic macala onke.
IFARM yaseSHARNFOLD: imizuzu emi-2 ukuqhuba. Khetha iziqhamo kunye nemifuno, iFama yeVenkile ethengisa imveliso yasekhaya kunye nevenkile yekofu. Uninzi lwabantwana, kunye neNdlela yaseFama, indawo yokudlala kunye neziganeko zeeholide zesikolo.
I-DRUSILLAS PARK: Yonwabela usuku oluhle losapho ngaphandle kwenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi e-East Sussex. I-Drusillas ithathwa ngokubanzi njengeyona zoo encinci yelizwe. Ubuninzi bokunyuka, ukutyibilika, ukutsiba kunye nokujinga kumnandi, imaze esebenzisanayo, umdlalo othambileyo wenqanaba eliphezulu, uTomas weNjini yeTanki ukukhwela, i-Hello Kitty igadi eyimfihlo kunye nokunye okuninzi.
I-KNOCKHATCH ADVENTURE PARK: Umzuzu we-10 uhamba. Ukhetho oluhle kwiintsapho ezineZiko leFalconry, iziko elikhulu lokudlala langaphakathi, iindawo ezininzi zokudlala zangaphandle, ifama yokufutha nokunye.
ICUCKOO TRAIL: Iyafikeleleka kwifama. Le ndlela ibukekayo yeemayile ezili-14 ilungile kubahambi kunye nabakhweli beebhayisikile bayo yonke iminyaka kwaye ilandela umzila kaloliwe wangaphambili 'weCuckoo Line' kwaye usuka eHeathfield ukuya e-Eastbourne Park.
A country girl who loves to travel to new places and experience new cultures. I have worked and travelled all over the world and stayed in some wonderful and hospitable places. Highlights were working on a Dude Ranch in Colorado, trekking in Nepal and backpacking down the coast of Vietnam. I have a horse and love to ride, I'm a beginner cross-fitter, I like running and generally being outside if the sun is shining! I now have two lovely properties for rent and I only hope that I can be as welcoming and accommodating as some of the people I met on my travels! Both my charming properties are perfect for friends and families who want to explore the gems of Sussex from the British countryside. And why not start by enjoying the 800 acres of land that the farm sits on, equipped with a lake and a small reservoir!
A country girl who loves to travel to new places and experience new cultures. I have worked and travelled all over the world and stayed in some wonderful and hospitable places. Hig…
Ndihlala efama kwaye ndiyafumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna naluphi na uncedo ngayo nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Polegate